Soomaalida loo qaadayo Sacuudiga ee Shaqalaha guryaha ah oo la sheegay inay hoos u dhigi doonaan baahida shaqaalaha ka shaqeeya Guryaha.
Xafiisyadda Adeegga ee Rugta Ganacsiga ee magaalladda Jeddah ee Sacuudiga ayaa sheegtay in Shaqaalaha laga soo qoranayo dalalka Somalia, Ethiopia, Gini iyo Chad hoos u dhigi doonaan Baahida Shaqaalaha ka shaqeeya Guryaha.
Wargeyska Alyoom ee ka soo baxa Sacuudiga ayaa ka soo xigtay Madaxda Rugta Ganacsiga ee Jeddah in hoos-u-dhacaasi la dareemi doono afarta bilood ee ugu horreysa sannadkan cusub ee 2017-ka, isla markaana ay hoos u dhigi doonto dhowrkii Nidaam ee ay Xafiisyadda Shaqaalaha qorta iyo Muwaadiniinta Sacuudiga ee Shaqaale-doonka u dhaqmi jireen.
Arrintan ayaa timid, kadib, markii ay Madaxda Xafiisyadda Shaqaalaha qorta kulan ku yeeshay Dhismaha Qadiir oo ay ku yaalla Xarunta Dhexe ee Guddoomiyaha Rugta Ganacsiga ee Jeddah, Mubaarak Al-siraaji..
Madaxa Guddiga Keenista Shaqaalaha, Yaxye Al-maqbuul ayaa sheegay in qorshaha ay qaaday Wasaaradda Shaqada iyo Horumarinta Bulshadda ee Sacuudiga maamihii la soo dhaafay ee lagu furay in Shaqaale laga soo qorto Somalia, Ethiopia, Gini iyo Chad ballan-qaadayo in hoos loo dhigo qiimaha Shaqaalaha la soo qoranayo.
Waxa uu cabasho ka muujiyey qaar ka mid ah Sharciyadda dhawaan la soo saaray ee eedeymaha la xiriira in Qiimaha Shaqaalaha sarreeyo.
Dhinaca kale, waxa uu tilmaamay inay Kulankooda kaga wada hadleen Nidaamka cusub ee Shaqaale qorista ee Xafiuisyadda Wasaaradda Shaqada iyo horumarinta Bulshadda iyo Ganaax la soo rogay iyo haddii shaqaalaha guryaha lagu keeni karo magaca Xafiiskooda iyo inay buuxiyaan cabasho ay gudbin doonaan Xoghayhnta Rugta Ganacsiga ee Wasaaradda Shaqada ku leedahay magaalladda Jeddah.